Ọpụpụ 35 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
35 E mesịa, Mozis kpọkọtara nzukọ ụmụ Izrel dum wee sị ha: “Nke a bụ ihe Jehova nyere iwu ka e mee:+ 2 Ụbọchị isii ka a pụrụ ịrụ ọrụ,+ ma ụbọchị nke asaa ga-abụrụ unu ihe dị nsọ, ụbọchị izu ike, nke a ga-ezu naanị ike na ya nye Jehova. Onye ọ bụla rụrụ ọrụ na ya, a ga-egbu ya.+ 3 Unu amụnyela ọkụ n’ụbọchị izu ike n’ebe ọ bụla unu bi.” 4 Mozis wee gwa nzukọ ụmụ Izrel dum, sị: “Nke a bụ ihe Jehova nyere n’iwu, sị, 5 ‘Sinụ n’etiti unu nata onyinye a ga-enye Jehova.+ Ka onye ọ bụla obi ya kpaliri+ weta onyinye Jehova, ya bụ, ọlaedo na ọlaọcha na ọla kọpa+ 6 na eri na-acha anụnụ anụnụ na ajị anụ e sijiri odo odo na eri na-acha uhie uhie na ezigbo eri linin na ajị ewu+ 7 na akpụkpọ ebule e sijiri ọbara ọbara na akpụkpọ anụ sil na osisi akeshịa 8 na mmanụ maka ihe na-enye ìhè na mmanụ bọlsọm maka ite mmadụ mmanụ nakwa maka ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ+ 9 na nkume ọnịks na nkume a ga-akwụnye n’efọd+ nakwa ndị a ga-akwụnye n’akpa obi ahụ.+ 10 “‘Ka ndị nwere obi amamihe+ n’etiti unu bịa rụọ ihe niile Jehova nyere n’iwu, 11 ya bụ, ụlọikwuu ahụ na ihe niile e ji rụọ ya na ihe mkpuchi ya, nko ya na awara osisi ya, osisi ntụhie ya, ogidi ya na ntọala ya ndị nwere oghere; 12 Igbe+ ahụ na okporo osisi ya,+ ihe mkpuchi ya+ na ákwà mgbochi+ a ga-eji gbochie ya; 13 tebụl+ ahụ na okporo osisi ya na arịa ya niile na achịcha ahụ a na-eche n’ihu Chineke;+ 14 ihe ndọba oriọna+ ahụ na-enye ìhè na arịa ya na oriọna ya na mmanụ+ ọkụ ya; 15 na ebe ịchụàjà nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ+ na okporo osisi ya; nakwa mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ;+ na ákwà a ga-eji gebichie ọnụ ụzọ ụlọikwuu ahụ; 16 ebe ịchụàjà+ nke àjà nsure ọkụ na ihe ahụ e ji ọla kọpa kpaa a ga-etinye n’ime ya, okporo osisi ya na arịa ya niile; efere+ ya na ihe ndọkwasị ya; 17 ákwà ngechi ogige ya,+ ogidi ya na ntọala ya ndị nwere oghere; ákwà a ga-eji gebichie ọnụ ụzọ ogige ya; 18 mkpọ́ niile nke ụlọikwuu ahụ na mkpọ́ niile nke ogige ya na ụdọ ha;+ 19 na uwe+ ndị ahụ a kpara nke ọma maka iji na-eje ozi n’ebe nsọ ahụ, uwe nsọ+ Erọn bụ́ onye nchụàjà na uwe ụmụ ya ndị ikom ga-eyi na-arụ ọrụ dị ka ndị nchụàjà.’” 20 Nzukọ ụmụ Izrel dum wee si n’ihu Mozis pụọ. 21 Ha wee bịa, onye ọ bụla obi ya kwaliri+ na onye ọ bụla mmụọ ya kpaliri, ha wee weta onyinye Jehova maka ọrụ ụlọikwuu nzute ahụ na maka ozi ya niile nakwa maka uwe nsọ ndị ahụ. 22 Ha wee na-abịa, ndị ikom na ndị inyom, onye ọ bụla obi ya kpaliri. Ha wetara ọla a na-etinye n’uwe na ọla ntị na mgbaaka na ihe ndị inyom ji achọ mma, ụdị ihe ọ bụla e ji ọlaedo mee, ya bụ, onye ọ bụla nke wetaara Jehova àjà a na-efegharị efegharị nke bụ́ ọlaedo.+ 23 Ndị niile nwere eri na-acha anụnụ anụnụ na ajị atụrụ e sijiri odo odo na eri na-acha uhie uhie na ezigbo eri linin na ajị ewu na akpụkpọ ebule e sijiri ọbara ọbara na akpụkpọ anụ sil, wetara ha.+ 24 Ndị niile na-enye onyinye ọlaọcha na ọla kọpa wetara onyinye Jehova, ndị niile nwekwara osisi akeshịa maka ọrụ niile metụtara ije ozi ahụ wetara ya. 25 Ndị inyom niile ndị maara ihe+ ji aka ha kpaa ihe, ha wee na-eweta eri na-acha anụnụ anụnụ na ajị anụ e sijiri odo odo, eri na-acha uhie uhie na ezigbo eri linin dị ka owu. 26 Ndị inyom niile nwere nkà bụ́ ndị obi ha kpaliri ji ajị ewu kpaa ihe ọkpụkpa. 27 Ndị isi wee weta nkume ọnịks na nkume ndị a ga-akwụnye n’efọd nakwa n’akpa obi ahụ,+ 28 na mmanụ bọlsọm na mmanụ ọkụ na mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ nakwa nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ.+ 29 Nwoke ọ bụla na nwaanyị ọ bụla obi ya kpaliri iweta ihe maka ọrụ niile Jehova nyere n’iwu site n’ọnụ Mozis mere otú ahụ; ụmụ Izrel wetaara Jehova onyinye afọ ofufo.+ 30 Mozis wee gwa ụmụ Izrel, sị: “Lee, Jehova akpọwo Bezalel+ nwa Yuraị nwa Họọ nke ebo Juda aha. 31 O wee mee ka mmụọ Chineke jupụta n’ime ya ka o wee nwee amamihe na nghọta na ihe ọmụma na nkà ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla 32 na ịtụ ụkpụrụ ọrụ, iji ọlaedo na ọlaọcha na ọla kọpa na-arụ ọrụ,+ 33 nakwa n’ọrụ ịkwụnye nkume n’ihe nakwa n’ọrụ iji osisi arụpụta ụdị ihe ọ bụla chọrọ nkà.+ 34 O tinyewo ike izi ihe n’obi ya, ya na Oholiab+ nwa Ahisamak nke ebo Dan. 35 O mewo ka obi ha jupụta n’amamihe+ ịrụ ọrụ niile omenkà na onye na-akpa ihe n’ákwà na-arụ,+ na nke onye na-eji eri na-acha anụnụ anụnụ na ajị anụ e sijiri odo odo, na eri na-acha uhie uhie na ezigbo eri linin achọ ákwà mma, nakwa nke onye na-ekwe ákwà, bụ́ ndị ikom na-arụ ụdị ọrụ ọ bụla na ịtụ ụkpụrụ ọrụ dị iche iche.